मधेश र मधेशका जनप्रतिनिधिलाई सामेल गरेर मात्र संविधानले कार्यान्वयन प्राप्त गर्छ : प्रदिप गिरी | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home विचार/ब्लग मधेश र मधेशका जनप्रतिनिधिलाई सामेल गरेर मात्र संविधानले कार्यान्वयन प्राप्त गर्छ : प्रदिप गिरी
सम्माननीय सभामुख महोदय र मित्रहरु
व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आधारभूत रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिने क्रममा उहाँको पार्टीलाई सम्झिँदा र हिजोका उत्तर प्रत्युत्तरलाई सम्झिँदा एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ ।
२०४८ सालमा यस देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि संसदको चुनाव भयो । त्यस चुनावमा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत सानो समूह आएर संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट थालियो संसदीय र गैरसंसदीय संघर्षबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै अनेक उकालो ओरालो पार गर्दै नेकपा माओवादीका रुपमा नेकपा माओवादी पार्टीका नेताका रुपमा प्रचण्ड नाम धारण गरेर पुष्पकमल दाहालले आफू आज यहाँसम्म यात्रा गर्नुभयो । यो पेस गर्नुभएर उस्तै जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट राजीनामा पेस गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको यात्रा एकदमै रोमाञ्चक रहेको छ ।
यसपछि उहाँका वैचारिक यात्रामा उहाँले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुले के देखिन्छ भने एउटा अत्यन्त गतिशील नेताका रुपमा आफूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो खूबी उहाँमा थियो । उहाँमाथि कमजोरी थिए भने विचारधारामा कमजोरी थिए । त्यो हाम्रो वैचारिक मतभेद कायम छँदै छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बहुलवाद शब्दको उल्लेख छ । यस बहुलवादका बारेमा कत्रो विवाद गरेको थियो उहाँको पार्टीले भन्ने हामी सबैलाई सम्झना नै छ । त्यति नभईकन अन्त्यमा जय नेपाल नै भन्न खोजेको हो कि जस्तो गरेर नेपालको जय होस् भनेर भनेको कुरा मलाई सम्माननीय मित्रले भर्खरै सम्झना गराउनुभयो । यसका लागि पनि उहाँलाई थप बधाई दिन चाहन्छु ।
नेतृत्व यस्तै हुन्छ । देश, काल र परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिष्कृत गर्दै जान्छ । र अन्त्यतः आफ्नो पार्टीलाई बचाएर स्थापित गरेर जान्छ । यसभन्दा बढी मैले यो विषयमा भन्नु पर्दैन । यो मैले मात्र अध्यक्ष प्रचण्डको बचाउमा भनेको कुरा होइन । यसको एउटा मार्मिक पक्ष छ । त्यो मार्मिक पक्ष के भने आँैलामा गन्न सकिने सदस्य भएका ती व्यक्तिहरुले (ती व्यक्ति भन्दै छु) उठाएका सवाललाई कदाचित् हाम्रो सरकारले नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक लिएर संशोधन गर्दै प्रजातन्त्रको परिभाषाको दायरा फराकिलो पार्न सकेको भए । यथासमय ०४७ सालको संविधान संशोधन गरेको भए कदाचित् यति लामो रक्तपातबाट हामी जोगिने थियौ ।
माओवादी जनयुद्धका दौरानमा उहाँहरुसँग वार्ता गर्न म आफैँ पनि संलग्न थिएँ । ऊ सामुन्ने नै हुनुहुन्छ । माओवादी प्रतिनिधिका रुपमा आउनुभएका कमरेड अग्निप्रसाद सापकोटा उहाँ, महराजी र टोपबहादुरजीसँग मैले पनि एक्लै वार्ता गर्दा उहाँहरुले त्यस समय एउटा शर्त राख्नुभएको थियो । ती शर्त यति साधारण शर्त थिए कि आज यो फोरमबाट भन्न पाउँदै छु कि उहाँहरुको शर्त तत्काल लगेर नेपाली कांग्रेसलाई सुनाएको थिएँ । ल त कमसेकम युवराजधिराजलाई छान्ने प्रक्रिया त संसदको अधीनमा आओस् । त्यो पनि हामीले गर्नसकेनाँै । नेपाली कांग्रेसले गर्नसकेन । म केन्द्रीय समितिमा थिएँ । गिरिजाबाबु पार्टी सभापतिमा हुनुहुन्थ्यो । शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । भन्न के खोजिएको हो भने हिजो पूर्वसभामुखले सम्झौताका कुरा, वार्ता गर्ने कुरा उठाउनुभयो ।
धेरै नै पाण्डित्यपूर्ण वकालतका कुरा अगाडि बढाउनुभयो । त्यो प्रसंग म किन सम्झाउन चाहन्छु भने प्रजातन्त्र र सम्झौताको कुरा गर्दा हामीले ०४८ सालको बहुदललाई माओवादी शक्तिलाई सानो समयमा पनि बुझेनौँ, ठूलो समयमा पनि बुझेनौँ । हिजो बडो गुनासो गरेर उहाँले भन्नुभयो । पूर्वसभामुखले भन्नुभयो । विद्वत्ताका साथ भन्नुभयो । वकालत गरेर भन्नुभयो । किन संविधान संशोधन गरिँदै छ ? बारम्बार यो किन गरिँदै छ ? आफूखुसी गरिँदै छ । सँगसँगै उहाँले आरोप लगाउनुभयो कि संविधान नै संशोधन गर्नु थियो भने प्रतिपक्षलाई विश्वासमा किन लिइएन ? प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिएको कुरा यदि सत्य हो भने हाम्रा अत्यन्त लचकदार नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई भन्छु । बारम्बार उहाँले माफी माग्ने गरेजस्तै यसपटक पनि उहाँले माफी माग्नुहुन्छ । होइन भने वस्तुस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर मधेशको समस्यालाई तिनै तदारुकताका साथ सम्बोधन गरौँ ।
आज यो सरकारले भोलिको सरकारले सिंगो सदनले गर्नु आवश्यक छ । त्यो नगर्दा यो हिजो नेकपा माओवादीको समस्या खडा भएभन्दो ठूलो समस्याका रुपमा खडा हुनसक्छ । यो विषय अलिक गम्भीर छ । यो विषयमा बोल्न उभिएको हुँ । म थुप्रै वामपन्थी मित्रहरुलाई देख्दै छु । वामपन्थी मित्रलाई देख्यो कि मलाई लेनिनको सम्झना आउँछ । सम्झौता र सम्झौतावादमा आधारभूत अन्तर छ । सम्झौतावादी बन्न कसैलाई भनिएको छैन तर सम्झौता गर्नुपर्छ । एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अत्यन्त सानो मान्छेलाई पनि अत्यन्त सानो समूहलाई पनि चाँडैभन्दा चाँडै संविधानको दायरामा तपाईंले बुझ्नुभएको प्रजातन्त्रको दायरामा ल्यायो भने व्यवस्थिति दिगो हुन्छ, शान्ति सुव्यवस्था खलबलिँदैन । हाम्रै निकट इतिहासमा हामीले नेकपा माओवादीको बढ्दो शक्तिलाई बारम्बार उपेक्षा ग¥यौँ । कहिले भन्यौँ, यो दिल्लीबाट चलेको छ, कहिले दिल्लीका स्थानीय सडकमा नेताहरु भोज खाएर बसेका छन् ।
एक जना महापुरुषले भन्नुभयो, यो त निर्मलनिवासबाट चलेको छ तर जुन सामाजिक आर्थिक आधारमा माओवादी आन्दोलन एउटा फिलिंगोबाट डढेलो बन्दै थियो, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएनाँै । म प्रचण्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु । शेरबहादुरजीको दिमाग यसबारेमा खुला छ । मधेश समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार, यसले पेस गरेको दस्तावेजहरु काफी खुला छ । यहाँँ एक ठाउँमा भनिएको छ, हामी संविधानको स्वीकार्यताको दायरालाई झन् फराकिलो गर्छौँ । त्यसमा पूर्वसभामुखले यो भन्नुभयो फराकिलो गर्न हामीलाई पनि आपत्ति थिएन, अझ उहाँले संकेत गरेर भन्नुभयो, तीनवटा पार्टीले मिलेर एकता गरेका थियौ अर्थात् नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी । त्यो एकता हामीले किन कायम गर्न सकेनौ ? उहाँले भन्नुभयो, त्यो एकता किन टुट्यो ?
म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु — त्यो एकता यसैकारणले टुट्यो त्यो एकता संविधान बनाउने हतारमा मधेशका मागलाई उपेक्षा गरेर गरिएको थियो । ढिलै सही । तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको मनमा चेत आयो । सुशील कोइरालाको मनमा त्यतिबेला आफ्ना पालामा संविधान घोषणा गर्ने हतार थियो, कसैलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने हतार थियो । तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सुशील कोइराला पार्टी सभापति संविधान घोषणा गराउन सक्नुभयो । दुवैको दुईवटा लक्ष्य पूरा भयो । सायद तत्कालीन कांग्रेसको नेतृत्व र एमालेको नेतृत्वको लक्ष्य पूरा भयो होला तर एउटा समूहको असन्तोष आयो र त्यो आजपर्यन्त कायम नै छ । भोलिपल्ट नै हामीले हाम्रो पार्टीमा जोडदार आवाज उठायौँ । मैले उठाएँ । सदनभित्र, पार्टीभित्र उठाएँ । कार्यसमितिमा उठाएँ । यसरी मधेशका समस्यालाई उपेक्षा गरेर गरिएको सम्झौता घोषणा गरिएको संविधान कायम रहँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बाध्य भएर एमालेका विरुद्धमा चुनाव लड्नुभयो ।
पहिलोपटक मैले जिन्दगीमा वामपन्थी शक्तिविरुद्ध मैले आफ्नो पार्टीमा बोलेको छु । होइन भने रसिया विघटन भइसकेपछि अब वामपन्थीसँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । एउटा राष्ट्रवादको परिभाषा गरेर संकीर्ण राष्ट्रवादको परिभाषा गरेर मुलुकको एक तिहाइ नागरिकलाई उपेक्षा गरेर तत्काल मेरो अभीष्ट पूरा हुन्छ भन्दैमा अभीष्ट पूरा गरेर गरिएको सम्झौतामा कुनै पनि इमानदार व्यक्ति संगत हुनसक्दैन । त्यसैले एकताको पुरानो आधार खडा हुन सक्दैन । म प्रचण्डलाई पुनः एकपटक बधाइ दिन चाहन्छु । एकताको नयाँ आधार खडा गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कालमा उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ । मेरो उपस्थितिमा भन्नुभएको छ । अनेक भाषणमा भन्नुभएको छ । बल्कि म नेकपा माओवादीले उत्साहपूर्वक उहाँले उठाउँदै आएको कुरालाई प्रचारप्रसारमा वहन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । यस कुरामा एकता चाहिन्छ । र एकताका निश्चित आधार चाहिन्छ । त्यो आधार के हो भने राष्ट्रको कुनै पनि बलियो समूहलाई बाहेक नगर्ने सिद्धान्तका आधारमा एकता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बाँडीचुँडी खाऊँ भन्ने पञ्चायती शैलीमा तँ राष्ट्रपति खा, म प्रधानमन्त्री खान्छु भन्ने आधारमा एउटालाई सभामुख बनाइदिने, दुईवटालाई मन्त्रालय दिने त्यो एकता भयो भने हामी माननीय पनि एक्लै उभिनुपर्ने हुन्छ । आज यहाँ म एक्लै उभिनुपरेको छ । प्रजातन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, एउटा व्यक्तिको विचार पनि आदरपूर्वक सुन्नुपर्छ । जुन दिन यस सदनले एउटा होइन, २० जनाको ५० जनाको कुरा सुन्न छोड्यो, प्रतीक मात्र भन्न चाहन्छु, र चाँडै संविधान बनाउने, मेरै पालामा संविधान बनाउने, जयजयकार लिने, पग्लिने भावना आयो, त्यस दिनदेखि प्रतिनिधि सभा, तत्कालीन संविधानसभा अलिकति बिटुलिएको छ ।
अहिले यसलाई संशोधन गर्नको लागि, सपार्नको लागि सही मार्गमा ल्याउनलाई जुन साहसिक काम अध्यक्ष प्रचण्ड र सभापति शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको छ, अरु सबै कुरा गौण छन, यस अभिभाषणको सन्देश हो । यसका पक्ष र विपक्षमा बुँदा बुँदा कुरा केलाउन सकिन्छ । एउटा वकिलले विपक्षमा तर्क गर्नुपर्ने पक्षमा तर्क गर्दैगर्दा अर्का एक जनाले पक्षमा तर्क गर्नुपर्ने विपक्षमा भयो भन्दा वकिलले तत्काल सच्याउँदै विपक्षीले यस्ता कुरा गर्लान् तर भनेर पक्षमा वकालत गरेछन् । मर्मकुरा के हो भने मधेश, र मधेशका जनप्रतिनिधिलाई सामेल गरेर मात्र संविधानले कार्यान्वयन प्राप्त गर्छ । रकमी र वकालती कुरा गरेर, टाउको गनेर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानमात्र होइन, सरकार पनि बहुमतको दस्तावेज हो । सरकारले पनि विपक्षीलाई सुन्नुपर्छ, व्यक्तिलाई सुन्नुपर्छ । धेरै गल्ती भएका छन् विगतमा । आज पनि गल्ती हुँदै छन् । तिनलाई म कोट्याउन चाहन्न । समय छैन, इतिहासले त्यसलाई देख्ला । हामी विचार गरौँला ।
कुरा के हो भने प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्र होइन, बहुमतको शासन हुँदाहुँदै बहुमतभन्दा बाहिर रहेकाको पनि शासनमा सहभागी हुने सम्भावनाको ढोका खुल्नु हो । अरुको कदर गर्नु हो, कदरमात्र होइन उनीहरुलाई भोलि शासन गर्न सक्छौ है भन्ने प्रत्याभूति दिनु हो । त्यतिमात्र होइन, प्रजातन्त्र भनेको एउटा व्यक्ति विशेषको अधिकारलाई सुरक्षित राखेर मात्र यहाँ बस्नुपर्छ । यस संविधानसभाले चाहँदैमा यस प्रतिनिधि सभाले चाहँदैमा एक जनाको मौलिक अधिकार अपहरण गर्न सकिन्न । मुख्य कुरा यो हो । म क्षमा चाहन्छु ।
यहाँहरु धेरै परिवर्तन बोकेर आउनुभएका वामपन्थी मित्रहरु हुनुहुन्छ । यत्रो महान् आन्दोलन, माक्र्सले कल्पना गरेको, लेनिनले अगाडि बढाएको र माओत्सेतुंगले क्रान्ति गरेका थुप्रै सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि व्यक्तिको गरिमा बुझ्न कमजोर भएको छ । अब कमसेकम हामीले बुझ्यौँ । यस संविधानसभाले त्यसको प्रत्याभूति गरोस् । मेरा मित्रले विपक्षीलाई सहमतिमा लिइएन भन्नुभयो । म क्षमा माग्न चाहन्छु । एकाएक यतिका धारा परिवर्तन गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा बनाइयो । मैले यो नियम मिचिँदै छ, गलत हुँदै छ भनेको थिएँ । २२ वटा संविधानको धारा मिचिँदै छ भनेँ । ओलीजीले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ मुखबाट खानुपर्ने कुरा नाकबाट पनि खानुपर्ने रहेछ, ठीक छ । थुप्रै प्रक्रिया गलत भएका छन्, ती कुरा पनि सम्झौँ । त्यतिबेला उहाँले दुई दिनमै आफूले प्रक्रिया मिचिएको कुराको बचाउ गर्नुभएको थियो । तर मुख र नाकबाट मात्र होइन, मानिसको शरीरमा नवद्वार हुन्छन्, अहिलेका प्रक्रिया पनि त्योभन्दा पनि फोहोरी हुनसक्लान् तर कहिलेकाही प्रक्रिया मिचेर पनि काम गर्नुपर्नुरहेछ ।
(कांग्रेसका सांसद तथा विश्लेषक प्रदिप गिरीले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दा राखेको सान्दर्भिक मन्तब्य )